Hunhu vs huwandu hwezviri mukati: Iyo ROI paKunyora Zvishoma | Martech Zone
China, August 13, 2015 Chitatu, October 14, 2015 Douglas Karr
Nezuro manheru ndakataura pachiitiko chinoshamisa chega chehukama hwehukama neruzhinji uye nyanzvi dzekutengesa muNew York City, yakaiswa Meltwater kune avo vatengi. Ini ndakakurukura, zvakadzama, kuti rakakura sei data riri kukanganisa rwendo rwevatengi uye kuti runokanganisa sei edu marongero epamhepo online. Iyo hurukuro yaive yakakurumbira zvekuti isu tiri kuitevera iyo yakazara yakazara whitepaper!
Mumwe wemibvunzo yakaunzwa kwandiri nemumwe munhu ndeyekuti vangagonesa sei hutungamiriri hwavo izvozvo kuvandudza mhando yekunyora uye kushandisa yakawanda nguva kutsvagisa nekuita yavo blogging zano kwaizowana kuwana zvirinani kudzoka pane investment pane kutarisa kune huwandu hweblog blog zvakaburitswa. Iyi infographic kubva InboundWriter chaizvo anotaurira ngano…
Ivhareji blog zvinyorwa zvinotora kambani $ 900 uye inopfuura 90% yemablog blog haiburitse mhedzisiro
Handirwisane nekutumira kakawanda… tinowanzoparidza kudzokorora, kuwanda uye kukosha sezvo isu tiri kutaura pamusoro pekambani blogging. Kakawanda kunokosha nekuti urikugadzira vateereri uye nharaunda iwe yauri kuisa tarisiro nayo. Momentum chinhu chakakura mukuverenga, kugovana, uye kuvaka kuvimba uye chiremera nevateereri vako.
Asi hazvireve chinhu kana usiri kuita nevateereri vako.
Tanga tichishandisa InboundWriter kutibatsira mune ino maitiro emwedzi mishoma yadarika. Uye iko kukonzeresa kwekutsvagisa misoro yakagadziridzwa, kuenzanisa nevateereri vako, uye kuvimbisa kuti iwe unogona kukwikwidza pachinhu chakakosha.
InboundWriter inoteedzera yekugovana uye analytics kupa yakasimba kuita metric pane yega yega yezvinyorwa zvaunonyora. Kwete izvozvo chete, zvinozvifananidza neako kuverenga kukuru.
Tora iyi positi semuenzaniso! Ndakaita ongororo yemusoro wenyaya, unoenderana nevateereri vangu, uye kuti ndinokwikwidza zvakadii:
Mukudzokorora iwo musoro wenyaya, yakapusa dhizaini yevanopfuura maringe inogona kuita chakakosha chiitiko. Saka ndakachinja zita rangu uye yangu post slug kuti ifanane.
Zvakaguma nei? Pakazara, kubvira uchishandisa InboundWriter, takaona chero kupi pakati pe200% kusvika ku800% kuwedzera mukubata pane zvatiri. Funga nezve izvo - kungoita nekatsvagurudzo mune misoro yakakodzera, isu tiri kuwana kudzoka kukuru mukudyara. Mune mamwe mazwi, kana isu tichida kudzora kutumira kwedu (zvinowanzoitika patinenge takabatikana nevatengi), tinogona kuramba tichisimudzira kukura mukuverenga kwedu uye kuita kwedu.
Ikoko zvachose kunogona kuve nekudzoka kune inishuwarenzi pakunyora zvishoma!
Tags: inboundwriterquality contenthuwandu hwehuwanduhuwandu vs huwandu
Mune chirevo chepamusoro une "Avhareji blog mablog anotora kambani $ 900… asi inopfuura 90% yemablog blog inogadzira chero zviwanikwa zvine bhizinesi mhedzisiro." Uri kurasikirwa ne "usaite"?
Aug 17, 2015 na1: 12 PM
Doh! Yakagadziridzwa. Thanks Twila!